umatilasi wasentwasahlobo ophambili ngamanani e-Wholesale | Rayson
Yasungulwa eminyakeni edlule, uRayson ungumkhiqizi ochwepheshile futhi ungumnikezeli onekhono eliqinile ekukhiqizeni, ekuklameni, naku-R&D. I-master spring umatilasi uRayson ungumkhiqizi obanzi kanye nomphakeli wemikhiqizo yekhwalithi ephezulu kanye nesevisi yokuma okukodwa. Sizohlinzeka, njengenjwayelo, ngenkuthalo izinsizakalo ezisheshayo ezinjalo. Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe mayelana nomatilasi wethu wentwasahlobo oyinhloko neminye imikhiqizo, vele usazise.Umklamo we-Rayson ugcwele isitayela esihlanzekile nesemfashini. Kwenziwa abaklami abanombono womuntu ngamunye ngemfashini futhi abanolwazi lokuhumusha imfashini yemfashini.